के हो लकडाउन ? | Janaandolan
Home समाचार के हो लकडाउन ?
मंगलबार विहानदेखि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ । विश्वमा तीब्र गतिमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई आम जनताले स्वागत गरेका छन् । विश्वका आर्थिक रुपमा ठूला मानिएका मुलुकलाई कोरोनाले तहस नहस बनाइरहेका बेला नेपालले सावधानी अपनाउँदै लडडाउन घोषणा गरेको हो ।
तर लकडाउनमा के गर्ने के नगर्ने ? भन्ने कुराबारे स्पष्ट भएको पाइन्न । लकडाउनलाई कफर््यु नै हो भनेर बुझेका छन् । तर, लकडाउन कफर््यु भने होइन । यो बेलामा अत्यावश्यक बाहेकका काम गर्न, यात्रा गर्न र गाडी चलाउन रोक लगाइन्छ । मानिसलाई घरबाहिर निस्किन नदिने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन मात्र गर्न दिइन्छ ।
सुरक्षामा चुनौती देखिए कर्फ्यु लगाइन्छ । तर सुरक्षा बाहेकका अरु कारणले मानिसको ओहोर–दोहोरमा रोक लगाउनु परे लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन संक्रामक रोग ऐन (२०२०) अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ ।
तर कर्फ्यु स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले लगाउन सक्छ ।
लकडाउन कर्फ्यु जस्तो कडा हुँदैन ।
तर ‘लकडाउन’ को आदेश पालना नगर्नेलाई कानूनी कारवाही हुन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको हो ।
# यो बेलामा औषधी उपचार, खाद्यवस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।
# अनुमति प्राप्त गाडी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी गाडी चलाउन पाइने छैन ।
# सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने हवाइ उडान र तोकिएका अन्य उडान बाहेक अन्य सबै व्यावसायिक उडान बन्द हुन्छ ।
# स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनार्थ आवश्यक कर्मचारी बाहेकलाई बिदा दिइन्छ ।
# औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउँछ ।
# व्यवसायीले औषधि र औषधीजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, अभाव देखाइ मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने ।
Previous articleभित्र खुल्ला बाहिर बन्द, छैन सावधनी पनि ?
Next articleहट लाइन सेवामार्फत सबै रोगको उपचार
समाचार के हो लकडाउन ?